किन अलोप्रिय बन्न लालायित छन प्रधानमन्त्री ओली – Weekly Nepal
किन अलोप्रिय बन्न लालायित छन प्रधानमन्त्री ओली
in विविध / सम्पादकको सिफारिस — ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १६:४४
बिजिता थापा रिजाल ।
आज आमाको मुख हेर्ने दिन एका बिहानै आमालाई फोन गरें आमा हजुरको आर्शिवाद जीवनभरकालागि दिनुहोला । आमाले भन्नुभयो एकाबिहानै तिम्रो फोन आएपछि म धन्य भएं । दिदीहरुले तिमी भन्दा पहिला नै फोन गरें तिम्रो फोनको प्रतिक्षामा थिए । मैले आमालाई सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोधें ठिकै छ । एक महिना भयो कोठाबाट बाहिर निस्केको छैन । मेरो दैनिकी यसरी नै बितेको छ । आमाको कुरा सुनेपछि लाग्यो नेपालीहरु राज्यको आदेश पालना गर्न तयार छन ।
आमाले उता बाट भन्नुभयो के छ त्यताको खवर सबै ठिकै त होला नि हैन ? मैले भने सबै ठिकै छ आमा ज्वाईको काम घरभन्दा पनि अफिसमा हुने भएकाले त्यही चिन्ताले सताएको छ । आमाको जवाफ आयो घरबाटै काम गरे हुन्न र ? हुन त हो तर उहां अहिले कार्यालय संगै खान नपाउने दुखीको सेवामा पनि खटिनु भएको छ । राहात बितरणमा सहभागी हुनु उहांको दैनिकी नै भएको छ । कहिले कहां कहिले कहां खान नपाएकाहरुकालागि सहयोगीको भूमिकामा देखिनु हुन्छ ।
मेरी आमा राजनीतिमा त्यती चासो राख्ने मान्छे त होईन तरपनि अहिलेको सरकारका मान्छेलाई भोट हाल्ने भोटर भने पक्कै हो । उहांले अहिले सम्म सूर्य बाहेक अन्त भोट नहालेको इतिहासपनि मलाई थाहा छ । आमाको आजकलको दैनिकी भनेको टेलिभिजन अगाडि झण्डै १२ घण्टा बिताउने गर्नु भएको छ ।
सरकारका मान्छेले के गरे दिनदुखी किन हप्तौ सम्म हिडेर आफ्नो गन्त्ब्य तर्फ गइरहेका छन । सरकार किन त्यस्तालाई संम्वोधन गर्न सक्दैन भन्ने उहांको प्रश्नले मेरो मन पनि एक छिन ढक्क फुल्यो । सरकारले जनताको दुखेको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्नेमा अहिले दल फुटाएर आफु बलियो हुने राणनीतिमा लागेपछि सामान्य मान्छेले पनि देश र जनताले आशा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो ब्यवहारबाट भने वाक्क दिक्क भएका छन । मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त बन्दै गएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै बिज्ञहरुले सरकारलाई अझै सजकता अप्नाउन आग्रह गरिरहेका छन । तर सरकार भने फोहोरी राजनीतिमा लागेर अलोकप्रियताको उत्कर्षमा पुगेको छ । म खासै राजनीति बुझ्ने मान्छे होईन श्रीमानको पेशाको कारण मलाई राजनीतिमा केही चासो राख्ने अवसर मिलेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता के हो ? सरकारले यता ध्यान दिन सकेन । महामारीबाट जनतालाई जोगाउने कि दल फुटाएर रमितामा रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रबैया पक्कैपनि स्वागत गर्न लायक छैन । जनातको मन संगै कारोनालाई जितेर मुलुकलाई सबृद्ध बनाउनुपर्ने अभिभारा बोकेका प्रधानमन्त्री होटलमा मान्छे थुनेर आफ्नो राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु पक्कै पनि सुहाउने कुरा होईन । मैले सरकारको आलोचना गर्न खोजेको होईन ।
जनतालाई सपना देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भिजन महान छ भन्ने भ्रममा म अहिले सम्म रहेछु । आफ्नै पार्टीका नेताले समेत बिरोध गरेर आलोचनाको पात्र बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र यसमा दोष म देख्दिन उहांका अहंकारी सल्लाहकार र उहांमा देखिएको अधिनायकबादी चरित्र अहिले मुलुककालागि घातक सावित हुदै छ । मैले यस्तो लेखिरहदा उहांका अन्धभक्तहरुले म माथि गालीका बर्षा अनाउला भन्न सक्दिन । मधेशी दललाई फुटाएर राज गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको राणनीति हिजो मध्यरातमा मधेवादी दलहरुबीचको एकताले भताभुंग बनाइदिएको छ । मधेशीहरु केही समयकालागि भएपनि बलियो भएका छन । सत्ताकोलागि जे गर्न पनि तयार हुने मधेशीहरुको एकता कति समय टिक्ला त्यो समयले नै बताउला । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खेलेको फोहोरी खेलले उहांको राजनीतिक छविलाई यसरी ध्वस्त बनाइदियो कि यो फेरी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धक्का लगाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा अवपनि सत्बुद्धी नपलाउने हो भने उहां नेपालका एक अलोकप्रिय नेताको रुपमा इतिहासमा लेखिने छन ।